Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 425
Lahatsary momba ny kaontin'ny mpitsabo nify
Misokatra hatraiza hatraiza ny tobim-pitsaboana nify sy nify. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny lisitry ny mpanjifa izay maniry andrim-panjakana manokana arakaraka ny toerana fiasana, toeram-ponenana ary isan-karazany amin'ny serivisy omena, ny politikan'ny vidin-javatra sy ny maro hafa. Ny fanaovana kaontin'ny mpanjifa amin'ny mpitsabo nify dia dingana tena mandreraka sy mandany fotoana. Tsy ilaina ny mitazona sy manavao ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny fotoana mety ihany, fa manara-maso ny tantaram-pitsaboana an'ny mpanjifa tsirairay, ary koa mitahiry antontan-taratasy maro momba ny tatitra tsy maintsy atao sy anatiny. Rehefa mihalehibe ny mpitsabo nify, miaraka amin'ireo fizotran'ny famokarana nify, mihatsara ihany koa ny kaontin'ny mpanjifa eo amin'ny ivon-nify. Soa ihany fa niara-nifindra hatrany ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny tsenan'ny serivisy. Afaka manadino izao ny mpitsabo nify momba ny filàna fandaniana fotoana betsaka isan'andro hamenoana endrika sy antontan-taratasy isan-karazany, mitazona tanana ny karatry ny mpanjifa sy ny tantaram-pitsaboana. Ankehitriny ny rafitra fitantanana kaonty mandeha ho azy momba ny fitantanana nify dia afaka manao izany ho azy ireo. Hatramin'izao, ny fampiharana USU-Soft momba ny kaontim-pitsaboana nify dia nanaporofo ny tenany tamin'ny fomba tsara indrindra. Mandresy haingana ny tsenan'ny firenena maro izy. Ny tombony lehibe amin'ny fampiharana ny kaontim-pitsaboana nify raha ampitahaina amin'ny analogue dia ny kalitao avo lenta, azo itokisana ary mora ampiasaina.
Matetika ny mpikarakara sy ny mpanampy dia karamaina arakaraka ny ora iasany - ora na fiovana. Ny rafitra USU-Soft momba ny kaontim-pitsaboana nify dia manana fotoana sy fisehon'ny fanatrehana izay ahafahan'ny mpitantana mpitsabo nify manara-maso ny fotoana hahatongavan'ireo mpiasa hiasa sy rehefa avelany ny asany. Mifandraisa aminay ny ekipa mpanohana ara-teknika hahafahanay manome fotoana. Rehefa manao an'io ianao dia tsy maintsy manapa-kevitra avy hatrany raha te hampiditra fotoana sy fanatrehana miaraka amin'ny famantaranandro. Ny rafitra USU-Soft amin'ny kaontim-pitsaboana nify dia mamela anao hanombana karazana asa isan-karazany ataon'ny mpiasa amin'ny fomba samihafa. Ny fitazonana ireo antontan-taratasinao any ivelany dia manome antoka fa tsy very na aiza na aiza ny fampahalalana momba ny fitsaboana ny mpanjifa, nangonina tanteraka tamin'ny toerana iray, ary voavaha tanteraka ny olan'ny sora-tanana tsy azo vakina nataon'ny mpitsabo nify. Ny mpitsabo nify mpitsabo ny mpanjifa, ary koa ny mpitsabo nify lohan'ny mpitsabo nify, izay manana fidirana amin'ny karatra rehetra, dia ho afaka hitady haingana ny fampahalalana tadiaviny.
Tehirizo ny boky momba ny fitsaboana an'ny mpanjifa. Aorian'ny fitsaboana ny marary, ny dokotera dia mamorona firaketana ao amin'ny rakitsoratry ny tantaram-pahasalaman'ny marary mba hampidirany vaovao momba ny fanendrena teo aloha. Ny dokotera dia mila mamaritra ny nify niarahany niasa ary nameno ny saha 'Diagnosis', 'Complaints', 'Anamnesis', 'Objective', 'Fitsaboana', 'Soso-kevitra' (raha ilaina dia azonao atao ny manampy saha hafa na fafao ireo tsy ilaina). Ny tantaram-pitsarana dia afaka mameno tsy amin'ny mpitsabo nify ihany, fa amin'ny mpiasa rehetra izay nomena ny zony hanitsy ny rakitsoratry ny hopitaly an'ny mpiasa hafa. Raha tsy misy izany, ny dokotera tsy manana zon'ny fidirana an-tserasera dia afaka mamorona sy manova tantaram-tranga ho an'ireo marary fotsiny.
Ny fiantsoana marary dia ampahany lehibe amin'ny asan'ny mpitantana. Azonao atao ny manoratra hafatra an-tsoratra miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fotoana fanendrena ao amin'ny rafitry ny kaontim-pitsaboana nify ary mandefa izany any amin'ny vondron'olona, ary avy eo miantso ireo marary tsy nahazo ilay hafatra. Mora izany rehefa tsy manam-potoana hanaovana antso ianao na marary be ny mpitsabo nify. Tsindrio ny bokotra 'Alefaso SMS' eo ambonin'ny lisitry ny marary ary avy eo miseho ny fikandrana mipoitra miaraka amin'ny lisitry ny hafatra miandry miandry halefa. Azonao atao ny mahita ireo marary izay nampitaina ny hafany, ary azonao atao ihany koa ny manafina azy ireo hahita ireo izay tsy nandefasana hafatra. Raha tsy nanamafy ny fanendrena azy ny marary iray dia azonao atao ny mamerimberina na manafoana ny fotoana voatondro ao amin'ny programa momba ny kaontin'ny mpitsabo nify. Mba hahitana karatra marary haingana sy hanolorany azy ireo any amin'ny biraon'ny dokotera, ny fiasa amin'ny fampiharana kaonty dia manampy betsaka. Tsindrio havanana amin'ny andro tadiavinao ao amin'ny kalandrie ary safidio ny 'Ataovy pirinty amin'ny daty rehetra ny fanendrena anao'. Ny fanasoketana abidia dia ampiasaina mba hahitana haingana ireo karatra ao anaty rakitra taratasy amin'ny anarany; ny fandaminana ny seza mpitsabo nify dia ampiasaina hizarana ireo karatra isaky ny birao, ka ilay marary izay voatendry amin'ny fotoana voalohany dia eo an-tampon'ny antontan-taratasy.
Raha tsy mitahiry kaonty abidy araka ny abidia ianao, dia mila manova ny safidy pirinty ao amin'ny lisitry ny fanendrena mandritra ny andro. Mba hanaovana izany, ny mpiasa manana ny andraikitra 'Tale' na mpiasa hafa nahazo alalana hanova ny firaketana antontan-taratasy dia tokony ho any amin'ny 'Settings', 'Document template', hitady 'Appointments: marary ny dokotera rehetra mandritra ny andro' ary manova ny fandaminana araka ny anarany amin'ny fanasokajiana isaky ny laharana firaketana ara-pahasalamana na ny fanendrena farany.
Ny tombony amin'ny rafitra USU-Soft momba ny kaontim-pitsaboana nify dia miteny ho azy manokana. Ny hafainganam-pandehan'ny asa ao amin'ny mpitsabo nify dia azo antoka fa hihombo haingana, ary koa ny maha-marina ny asa sy ny fifandraisana mivantana amin'ireo mpanjifa. Na izany aza tsy izany ihany. Rehefa manomboka mampiasa ny rafitry ny kaontim-pitsaboana nify ianao dia azo antoka fa hahazo valiny eo noho eo. Na izany aza, fotoana vitsivitsy aorian'izay dia mety hahatsapa ianao fa matoky anay ampy ianao hahazoana fahazavana fanampiny izay mety hahatonga ny mpitsabo nify ho tsara kokoa! Mba hiantohana ny fiasa tonga lafatra amin'ny programa kaontinao dia mila ekipa mpandahatra programa manokana ianao izay vonona hanampy anao amin'ny kaontinao rehefa mila izany ianao. Araka ny efa nolazainay, ny kaonty dia homena lanja fisaorana noho ny programa kaonty!